Semalt: Mialà eo amin'ny 6 Online Scams
Ireo mpangalatra Cyber ​​dia nisy fiantraikany tamin'ny varotra an-tserasera sy ny olona maro tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny tranonkala sy ny serivisy amin'ny aterineto dia mahatonga antsika mora handoa faktiora, hividy ny zavatra tiantsika, hamahanana hotely ary hanao asa samihafa. Mandritra izany fotoana izany, ianao dia voafandrika amin'ny hackers, ary tsy azonao an-tsaina ny zava-mitranga. Ny fitaovan'ny fitaovana sy ny fomba fiasa dia miovaova amin'ny mpivarotra fanafihana nentim-paharazana amin'ny rindrambaiko malaza amin'ny fangatahana lavitra. Ny olona sasany koa dia voafandrika amin'ny alàlan'ny tsindrin-tsakafo miparitaka manerana ny tontolo tsy fantatra.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia mamaritra hevi-baovao 6 izay mihoatra noho ny mampidi-doza amin'izao fotoana izao.
1. Loka Iraisam-pirenena
Mifototra amin'ny United States sy Kanada matetika ny mpampihorohoro sy ny mpihaza. Mampiasa mailaka mivantana na telefaona mivantana izy ireo mba hampirisihana ny mpanjifa hividy lotteries avo lenta. Miondrika izy ireo fa afaka mandresy zavatra mahagaga amin'ny alalan'ireo loteria ireo. Olona maro no voafandrika ary mandany an'arivony dolara amin'ireny rafitra ireny. Ny Komity Federaly Federaly (FTC) dia milaza fa ny ankamaroan'ny fampielezan-kevitra dia mety ho telefaonina.
2. Ny virosy fo (izay tena izy)
Marina fa manamboatra viriosy sy malware matetika ny vokatra teknolojika sy gadget. Raha hitanao fa tsy mandeha tsara ny rafitry ny ordinateranao na mihidy izy, dia mety hisy ny virosy. Tokony hametraka tahirin-tsarimihetsika antitra iray ianao raha mbola azo atao. Na izany aza, misy 'virosy fo' sasany dia mety hanafika ny ordinateran'ny ordinateranao. Manala ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana izy ireo, ary voatery hametraka rindrambaiko manokana ianao. Vokatr'izany, lasa virosy ny otrikaretina diso ary mangalatra ny fampahalalana mafonja anao. Ny vahaolana tokana amin'ity olana ity dia ny tsy hametrahanao ny rindrambaiko tsy matoky anao..
3. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Indraindray ireo mpampihorohoro dia maka tahaka ny solontenan'ny asa soa. Tiany ianao hanampy ireo niharan-doza, fanafihana mpampihorohoro na valan'aretina. Matetika, ireo mpihetraketraka dia mamono olona izay mampiseho fahalianana hamaha ny olana eo amin'ny faritra. Noho izany, ny eritreritrao tsara dia lasa diso rehefa mandany vola be ianao ary tsy mahazo valiny.
4. Fiatrehana fiarovana
Raha misy mailaka milaza aminao fa nandika ny fitsipika sy ny fitsipika napetraky ny orinasa iray ianao, dia aza manahy azy io. Ny sarimihetsika Hollywood marobe dia mampiseho ny fisian'ireo mpihome-jiolahimboto izay mihambo ho mpiambina polisy na mpiambina. Tsy misy manampahefana mandefa mailaka manokana. Izy ireo dia manao ny fikarohana ataony amin'ny ambaratonga goavambe ary manatratra anao mivantana. Tsy tokony mandefa vola amin'ny olona iray izay miezaka ny ho mpiambina ny filoha ianao. Tsy ilaina ny manahy na dia milaza aza izy fa efa niharan'ny olana ara-piarovana ianao.
5. Asa vaovao
Ny fahasamihafana amin'ny hosoka amin'ny Internet dia manome asa sy tapakila amin'ny sahirana sy mahantra. Ny tsy fananana asa dia iray amin'ireo ozona lehibe indrindra amin'ny nahazo diplaoma, saingy tsy midika izany fa mandefa ny volanao amin'ny olona iray tsy fantatrao ianao. Ny sasany amin'ireo mpamaham-bolongana dia mangataka anao mba hisoratra anarana ao amin'ny tranonkalany ary handefa ny CV anao. Tsara ny mandeha ka alefaso ny CV anao, fa tsy tokony handoa azy ireo ianao raha tsy misy orinasa mendrika hiantso ireo mpiasany hiasa. Ary raha asaina mandoa vola ianao alohan'ny hividianana entana, dia misy ny fahafaha-manao hacker hanangona ny volanao.
6. Fiarahabana an-tserasera
Olona maro no misoratra anarana mba hampiaraka ny tranonkala isan'andro. Te-hanana namana tsara izy ireo na amin'ny daty mahafinaritra na amin'ny fanambadiana. Amin'ny lafiny iray, ny tranonkala mampiaraka an-tserasera dia tsy tsara ny miaraka. Ireo mpihomehy sy mpitsikilo matetika dia mamandrika olona amin'ny alalan'ireny tranonkala ireny. Izy ireo dia lasa mpinamana voalohany, mendrika ny ho tovovavy mahafatifaty sy mahafinaritra. Avy eo ny tanjon'izy ireo dia ny hanorina fifandraisana aminao ary hangataka vola kely. Raha misy olona milaza fa sahirana izy dia mety hanampy azy fa tsy mandefa vola any amin'ny kaontiny amin'ny banky Source .